आश्विनको मान्कड़ सहि या गलत ? विश्व क्रिकेटनै विभाजित – WicketNepal
आश्विनको मान्कड़ सहि या गलत ? विश्व क्रिकेटनै विभाजित
Bipul Bhattrai, २०७५ चैत्र १२, मंगलवार १२:१६
क्रिकेटलाई ” जेन्टलमेन्स गेम ” अर्थात भालाद्मीहरुको खेल भन्ने गरिन्छ। त्यसै भलाद्मीपनलाई अघि राख्नु पर्ने मान्यताको कारणले क्रिकेटको नियम अन्तर्गत रहेर भएको कामले पनि विवादास्पद बन्ने गरेको छ।
सोमबार भारतको जयपुरमा यस्तै एक अवस्था सृजना भयो। इन्डियन प्रिमियर लिगको बाह्रौं संस्करणको चौथो खेल अन्तर्गत भिड्दै थिए घरेलु टोली राजस्थान रोयल्स र किंग्स एघार पन्जाब। जयपुर स्थित सबाइ मान सिंह स्टेडियममा पन्जाबले दिएको १८५ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा राजस्थानले १२ ओभरको समाप्तिमा मात्र १ विकेट गुमाएर १०५ रन जोडीसकेको थियो। उसका जस् बट्लर ६७ रन बनाएर खेली रहेका थिए।
खेलको १३ औं ओभर बलिङ्ग गर्न आए पन्जाबका कप्तान रबिचन्द्रन आश्विन। त्यस ओभरमा आश्विनले बट्लरलाई मान्कड़ आउट गरेपछि पुन: एकपटक सिंगो क्रिकेटिंग जगतको ध्यान त्यसतर्फ तानियो।
बट्लरलाई आश्विनले मान्कड़ आउट गरेपछि खेलले दिशा परिवर्तन गरेको थियो। आश्विनले बलिंग गर्दै गर्दा बलरलाई नहेरी क्रिज छोडेको बेला आश्विनले बटलरले क्रिज छोडेपछि स्टम्प ढालेका थिए जसपछि थर्ड अम्पायरले आउट घोषणा गरेको थियो। बट्लरले क्रिज छोडीरहेको देखेपछि आश्विनले आफ्नो बलिंग याक्सन रोकेर बट्लरले क्रिज छोडेपछि स्टम्प ढालेका थिए जसको बट्लरले पत्तै पाएनन्। खेलको दौरान कमेन्टेटरले आश्विनको आलोचना गरेका थिए। खेलपछि आश्विनले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आफुले यो काम कुनै पुर्व योजना अन्तर्गत नगरेको बताएका छन्।
आश्विनको सो निर्णयलाई लिएर क्रिकेट विश्लेषक र पण्डितहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया समेत आउन थालेको छ।
आश्विनले बट्लरलाई मान्कड़ आउट गर्नु ठिक या बेठिक ?
आश्विनले बट्लर बिरुद्ध लिएको निर्णय क्रिकेटको नियम अनुसार सहि हो। क्रिकेटको नियम अन्तर्गत ४१.१६ मा उल्लेख गरिए अनुसार यदि कुनै नन् स्ट्राइकर ब्याट्सम्यानले बल गर्नुभन्दा अगाडीनै रन लिनका लागि आफ्नो क्रिज छाड्छन् भने बलरसंग उनलाई रन आउट गर्ने अधिकार रहन्छ। क्रिकेटको खेल भावनाको पक्षधरहरुले मान्कड़ गर्नु अघि ब्याट्सम्यानलाई कम्तिमा १ पटक चेतावनी दिनु पर्ने धारणा राख्ने गर्छन्। तर सोमबार आश्विनले बट्लरलाई कुनै चेतवानी दिएनन्।
अझ रोचक पक्ष त के छ भने, आश्विनले आफुले बल फाल्न अघि थोरै समय रोकिएका छन्। सो रोकिएको समय नन् स्ट्राइकर ब्याट्सम्यान बटलरलाई थाहा थियो या थिएन भन्ने कुरा बट्लरमा सिमित छ। तर आश्विनले बल फाल्न अघि रोकिएर बट्लरलाई क्रिज छाड्ने समय दिएको प्रस्टै देखिन्छ।
Complete proof that what he did was most certainly not instinctive….. never before or ever again will Ashwin try and bowlaball in this position!!….. he should man up and admit hes wrong at the very least!! Disgrace!! pic.twitter.com/TjBOuPLR0G
आश्विन र बट्लरसंग यो घटना पहिलो पटक भएको भने होइन्। सन् २०१२ मा भारत र श्रीलंका बिचको खेलका क्रममा आश्विनले सोहि ढंगमा श्रीलंकाका लाहिरु थिरिमानेलाई आउट गरेका थिए। तर त्यस दौरान भारतको कप्तानी गरिरहेका विरेन्द्र शेहवागले थिरिमानेलाई पुन: ब्याटिंग गर्न बोलाउंदै खेलको भावनाको सम्मान गरेका थिए।
उता सन् २०१४ मा श्रीलंका र इंग्ल्याण्डको खेलका क्रममा जस् बट्लर सोहि ढंगमा मान्कड़ आउटको शिकार बनेका थिए। त्यस समय उनलाई श्रीलंकाका सचित्रा सेनानायकेले आउट गरेका थिए।
क्रिकेट विश्लेषकहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया :
आश्विन र बट्लरको सो घटना पछि क्रिकेट विश्लेषकहरुको मिश्रति प्रतिक्रिया आइरहेको छ। आश्विनले नियमसंगत ढंगले विकेट प्राप्त गरेको भन्ने एकतर्फी प्रतिक्रिया आउँदा अर्को पक्षबाट आश्विनले खेलको भावनाको सम्मान नगरेको भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ।
आश्विनले बट्लरका बिरुद्ध लिएको सो निर्णय नियमका हिसाबले उचित भएपनि यसले खेलको मर्यादा र भावना माथी प्रश्नचिन्ह उठाएको छ। कुनै बलरले आफ्नो बलिङ्गका क्रममा केहि क्षण रोकिएर मान्कड़ गर्नु कहाँ सम्म उचित छ भनेर निर्णय गर्ने अधिकार सायद बलर स्वयंसंग छ। तर खेलको मर्यादा र भावनालाई सम्मान गर्ने हो भने यस किसिमका बिबादास्पद नियमलाई समेत आइसीसीले ध्यानमा राख्न जरुरी देखिन्छ।
के हो मान्कड़ आउट ?
मान्कड क्रिकेटको नियम अनुसार ब्याट्सम्यान आउट हुने एक प्रकार हो। तर यसमा भिन्न पक्ष के छ भने, मान्कड कुनैपनि बलरले आफुले बल गर्नुभन्दा अगाडीनै गर्ने गर्छन्। यदि नन् स्ट्राइकरमा रहेका ब्याट्सम्यानले बलरले बल गर्नुभन्दा अगाडीनै क्रिज छाडेको खण्डमा बलरले नन् स्ट्राइकरलाई बल गर्न अगाडीनै रन आउट गर्न मिल्ने नियमलाई मन्कड़ भन्ने गरिन्छ।
सन् १९४७ मा भारत र अष्ट्रेलियाको दोस्रो टेस्टका क्रममा अष्ट्रेलियाका विल् ब्राउनलाई भारतका बिनो मान्कड़ले नन् स्ट्राइकर एण्डमा आउट गरेपछि यस किसिमको कार्यलाई मान्कड़ आउट भन्न थालिएको हो।